▷ Yini Edingekayo Ukuze Uhlanganise Izinzuzo Zebhizinisi Lakwa-Apple? - 【Ukuqhathanisa】 2022
Kuzodingekani ukuhlanganisa inzuzo yenkampani yakwa-Apple?
Izindaba Nezibuyekezo | 0 Amazwana
Baba munye kuphela
Ividiyo ye-Amazon Prime (Ividiyo efunwayo); Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril (Abalingisi); Santiago Segura (Umqondisi)
Ukwamukelwa kwebhizinisi kwe-Mac, i-iPad, ne-iPhone kukhule kakhulu phakathi nalolu bhubhane. I-Apple kanye nabalingani bayo bebhizinisi bafuna ukuhlanganisa lokhu kwanda ngo-2022, okulindeleke ukuthi kube omunye unyaka obalulekile wokutshalwa kwezimali kwehadiwe.
Sebenzisa isu lokukhula
Sibonile i-Apple kwezamabhizinisi ikhula ngokushesha phakathi nalolu bhubhane; U-2021 bekuwunyaka wesibhengezo sokuthengiswa kwezingxenyekazi zekhompiyutha, njengoba izinkampani zitshale imali kumakhompyutha namadivayisi ukusekela amaqembu ayingxube. I-Apple ngokusobala izuze kuyo.
I-Apple emkhakheni wamabhizinisi manje inabahlinzeki be-MDM abaningi kunangaphambili, futhi ukuncintisana phakathi kwabahlinzeki besevisi yebhizinisi le-Apple kuyakhula. Kungani? Ngenxa yokuthi isidingo sebhizinisi semikhiqizo ye-Apple asikaze sibe sikhulu, futhi siqhutshwa izintandokazi zabasebenzi, ukuthunyelwa kuyaqhubeka nokukhula. Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa kwebhizinisi kumadivayisi kukhule ngo-15,1% kulo nyaka futhi kuzogcina lawo mazinga (nakuba ngokukhula kancane) ngo-2022, ngokusho kukaGartner.
I-Apple ifuna ngempela ukugcina ubukhona bayo kule makethe ekhulayo. Uyazi ukuthi ama-M-series Macs athola amandla, njengoba ukuthengiswa kwe-iPad yezinkampani kuqhubeka nokukhula. Ukugcina lo mfutho, I-Apple Business Essentials iyisinyathelo esibalulekile ekwenzeni izixazululo zayo zikhange nakakhulu kubasebenzisi bebhizinisi. Uhlelo lusebenza njengesango lokuhlinzeka amabhizinisi amancane ngendawo yokungena okulula ukuyiphatha emhlabeni obanzi wezixazululo ze-MDM ezihlinzekwa ozakwethu be-Apple, okuhlanganisa ne-Jamf.
Thola indawo yakho yokuqashisa
Kepha ukwenza ngcono ukutholakala kokusekelwa kwamadivayisi we-Apple akuwona ukuphela kwendlela esikhaleni sebhizinisi inkampani ezama ukubhekana nayo. Kunesifiso esikhulayo phakathi kwabasebenzisi bezinkampani sokuqashisa izisetshenziswa zabo zobuchwepheshe, kusho i-BNP Paribas.
Ucwaningo lwe-BNP Paribas lubonisa ukuthi u-76% wemishini ye-IT usathengwa eYurophu, kodwa uphakamisa ukuthi izinkampani ziphendukela ekufinyeleleni kunobunikazi. Lokhu akumangazi, njengoba u-77% wezinkampani seziqasha izimoto. Ukuqashisa amakhompyutha kunengqondo, ikakhulukazi uma uphatha isabelomali esilinganiselwe phakathi nenhlekelele yamazwe ngamazwe.
Kungenzeka ukuthi u-Apple usebenza buthule ukuze anelise isifiso esikhulayo sokuqashisa ubuchwepheshe. Sisanda kufunda ngesivumelwano phakathi kwe-Apple nozakwethu wezezimali i-CIT lapho izinkampani zase-US zingaqasha ama-Mac azo kusukela ku-€ 30 / ngenyanga / ngomshini. Lolu hlelo lwenza kube lula ngezinkampani ukuthi zisebenzisa amadivaysi e-Apple kuwo wonke amabhizinisi azo, futhi lingazisiza ukuthi zithumele amadivaysi kumakhompyutha akude njengoba izindawo zokusebenza eziyingxube ziba zisezingeni.
Okwamanje asazi ukuthi ingabe lokhu kucindezela kubonisa isu elibanzi lomhlaba wonke lokuvumela abasebenzisi bebhizinisi ukuthi bafinyelele i-Apple njengesevisi, noma uma kubonisa umnikelo owodwa ovela endaweni eyodwa. Kodwa noma kunjalo akugcini lapho.
Yini elandela ukuthunyelwa?
Eqinisweni, ngisho nezixazululo ezisebenzayo ze-MDM nezinhlelo zokuqasha, izinkampani zinomsebenzi omningi okufanele zenze ukuze zibambe amathuba okuguqulwa kwedijithali. Ngaphambi kwalolu bhubhane, inhlolovo yakwaDeloitte ikhombise ukuthi yize kuthunyelwa amadivaysi eselula amaningi, izinkampani eziningi ziyaqhubeka nokusebenzisa izinqubo zebhizinisi eziphelelwe yisikhathi.
Lo mbiko uchaza imisebenzi eyisihluthulelo elula kodwa ebalulekile engakakwazi ukusingathwa amadivaysi eselula: I-59% yabasebenzi ayikwazi ukuqedela ama-timesheets, isibonelo; Ama-39% awakwazi ukuhambisa izicelo zelayisensi; futhi u-41% kuphela ongagunyaza ama-invoyisi kumadivayisi eselula.
Lokhu kukhombisa iqiniso lapho izinkampani eziningi zingakashintshi ukucabanga kwazo ngokwanele ukuze ziguqule izinqubo zebhizinisi ezikhona, futhi ukuzishintsha kubeka izidingo ezengeziwe kubhajethi yezobuchwepheshe. UGartner uthi u-65% wamalungu ebhodi afuna ukusheshisa amaphrojekthi okuguqula idijithali.
Kunesidingo sokubhekana ngqo nalezi zinkinga, ikakhulukazi lapho izinkampani zibhuquza ubhasikidi omkhulu wezinselelo, ezinganqunyelwe kodwa ezihlanganisa: Ukulahlwa Okukhulu, ukucatshangelwa kokunciphisa indawo yamahhovisi, nesidingo sokuqalisa ikhithi entsha ukuze zisekele. indawo entsha yokusebenza.
Le cornucopia yezinselelo ibhebhethekisa ukuqashelwa kokuthi ukutshala imali ezinqubweni zebhizinisi zedijithali kungaba semqoka ekusizeni izinkampani ukuthi zinqobe lezi zinkinga ngezinye izikhathi eziyingxabano.
Nakuba I-Apple Business Essentials kanye nohlelo olusha lokuqashisa ngezohwebo lungasiza ekuxazululeni ezinye zalezi zinkinga, isinyathelo esilandelayo sokuhlanganisa izinzuzo ze-Apple emakethe yebhizinisi sizoncika kubalingani abafana ne-IBM, Cisco, SAP, ne-Microsoft. izinkampani zingayisebenzisa ngendlela efinyelelekayo ukwenza izinqubo zebhizinisi zazo zibe yidijithali ngokushesha nakalula.
Mhlawumbe i-Apple ingakhuthaza intuthuko enjalo ngokwenza i-App Store yenkampani?
Ngilandele ku-Twitter noma ungijoyine e-AppleHolic Bar & Grill naku-Apple Discussion Groups eMeWe.
Imininingwane © 2021 IDG Communications, Inc.